Vaovao - Fampitana mandeha ho azy ny milina Sandblasting Scop azo ampiharina
Ho an'ny takelaka, lovia, boaty, mombamomba azy ary ny fanodinana sandblasting misy endriny manokana, toy ny: lovia vy tsy misy fangarony, vy tsotra, vy fitaratra, vato, titanium, vilany, lafaoro toast, baoritra, fampiasa, tontonana DVD, kahie, motherboard komputer, takelaka vy, haingon-trano, badge dokam-barotra, fitaovana fampitaovana, takelaka aluminium, sns.
Ity milina sandblasting ity dia milina sandblasting mandeha ho azy, izay azo noforonina manokana sy novokarina arakaraka ny toetran'ny vokatra ao amin'ny orinasanao. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fandidiana tsotra, ny fahombiazana avo lenta, ny fasika haben'ny sombin-javatra samy hafa dia azo soloina arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fizotrany, ny fampiasana tsingerina mandeha ho azy fasika, ny fitehirizana vola sns.
Noho ny loza mety hitranga amin'ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny alitara ao amin'ny mpanangona vovoka dia ilaina ny misoroka ny fampifangaroana ireo fitaovana mora may toy ny flannelette, taratasy, vovoka hazo ary vovoka manezioma miaraka amin'ny vovoka nateraka nandritra ny fizotran'ny metaly ferrous.
Na izany na tsy izany dia avela manipy sigara tsy dorana na zavatra may hafa ireo mpandraharaha fitaovana ao anaty saron-tsigara na fantsom-pifamoivoizana.
Mba hitandrina, ny mpampiasa fitaovana JCK dia tokony hifampidinika sy hanaraka ny kaody nasionaly sy ny afo eo an-toerana na kaody hafa mifandraika amin'ny famaritana ny toerana hametrahana ny sambo ary alohan'ny hametrahana azy.
Raha toa ny mpanangona vovoka ampiasaina hanangonana vovoka mora may na mipoaka dia tsy maintsy apetraka ivelan'ny zavamaniry ilay mpanangona vovoka. Ho fanampin'izany, ilaina ny manatona ireo mpiasan'ny fitaovana famonoana afo izay mahalala ny lozam-pifamoivoizana toy izany sy ny fitsipiky ny afo eo an-toerana, ary manome sosokevitra sy mametraka ireo fitaovana miady amin'ny afo mifandraika amin'izany. Ilay mpanangona vovoka mihitsy dia tsy miaraka fitaovana miady amin'ny afo.
Amin'ny tranga sasany dia ilaina ny mametraka vent. Ho an'ity tanjona ity dia mankanisa any amin'ny mpampindram-bola na mankanisa ao amin'ny Manual National Association Protection Protection mba hamaritana ny tahan'ny faritra misy ny fipoahana. Ho an'ny fitaovana fanaraha-maso vovoka napetraka ao amin'ny atrikasa, ny vent ambony dia tsy maintsy entina mankany ivelany mba hampihenana ny mety hipoahan'ny faharoa. Noho izany, azafady mba mifandraisa amin'ireo departemanta mifandraika amin'izany mba hamaritana ny fomba famoahana rivotra mety. Rehefa manafatra, raha tsy misy fepetra takiana manokana dia matetika ny fanalana vovoka dia tsy ahitana varavarana fanamaivanana.
Ny mpanangona vovoka cartridge dia mety amin'ny toerana fanesorana vovoka eo ambanin'ny mari-pana voajanahary mba hanangonana vovoka sy poti mihantona. Na ampiasaina amin'ny fifehezana ny fahalotoan'ny rivotra na ao anatin'ny fizotry ny famokarana, ny mpanangona vovoka cartridge dia afaka miantoka ny fanangonana vovoka mahomby sy mitohy.